Cabdirisaaq Sh Axmed Daahir ( mucaad)
fikir iyo Aragti cudoon
wax ka baro khayraadka dhulkeenu qaniga ku yahay
Fooxu guud ahaan waa xabag dhir gaara ka baxda si yaabo badana loo isticamaalo , magaca guud ee xabagta fooxa loo yaqaan waa BEEYO , hasa ahaatee marka magaca xabag oo dhan guud ahaan kulmiya marka shaqadeeda iyo habka loo beero lagu daro waa XIJI.Dadka beeyada beera iyaga waxaa loo yaqaan beeyeesato .
Beeyadu waxay ka baxdaa dalka soomaaliyeed geestiisa waqooyi bari dhulka imminka loo qayaan PUNTLAND , dhirta beeyadu ka baxdo iyada waxaa loo yaqaan MOXOR .
Geedka labaad ee isagu xabagta bixiya waxaa loo yaqaan MAYDDI.
BEEYADAU marka hore waa dareere caanaha ciirta ah u eg oo CANANNO la ya yidhaahdo,hasa yeeshee marka ay angagto ayey is qabsataa oo noqotaa xabag.
Sidaa darted marka geedka beeyada ah la beerayo waxaa la dhaawacaa ama la qoomaa geedka jirridiisa halkaas oo canannadu dibada usoo dixato dabadeedna mudo laba todobaad ah ayaa la daayaa , kaa waxaa la yidhaahdaa JAF-HORAAD.
Mar labaad ayaa qoomihii hore la dhaawacaa si ay cananno badan u keenaan kaana waxaa la yidhaahdaa JAF-DANBEED , ka dibna waxaa la daayaa ugu yaraan laba bilood , dabadeedna xabagtaa la guraa.
Alaabta geedka lagu qoomo oo marka danbe xabata lagu fujiyo waxaa la yidhaahdaa MANGAAF
Xijigu waxa uu u kala baxaa dhowr qaybood waxaana ka mida
1 . Luubaan ka : oo ah xabagta moxortka oo soocan midabkiisu waa cadaa aad buuna u udgoonyhy.
2 . Foox : oo ah jirifta beeyada oo xabag yaryarina ku dheg dhagantahy, noocaas isaga ah waa la shidaa wax kale laguma qabsado
3 .Maydii : waa xabag soocan oo lakab lakab isku qabsata geedaka maydigu waa nooca ugu qaalisan xijiga oo dhan waxaan laga sameeyaa alaabo badan .
2.AFSOOMAALI - WASAARADA WAXBARASHADA
W/Q : cabdirisaaq Axmed Daahir Warsame ( Mucaad)
Posted by Abdirizak mu'aad at 02:05 1 comment:
Dagaalka ugu culus oo maanta dunidu ku jirtaa waa kan ku salaysan afkaarta , in ay guulaystaan waxa aad aaminsantahay waa tan kaa dhigaysa in aad tahay hugaamiye dhaba . Guuldaraduse waxaa kuugu filan in aad noqoto xanbaare fikrado lagu shubay oo aysan ka dhaadhacsanayn ulajeedkoodu . dadka iyaga oo indho qudha wada leh oo isku mida hadana ma jiraan laba shaqsi oo isku si wax u arka.
Cabitaanada qaari awood uma lahan in ay ku haraad tiraan cunooyinka qaarna kuma dharjin karaan , dariiq kastana maahan kan ku gaarsiinaya halka aad rabto , fikradaha qaarna maahan kuwo ku siinaya Natiijada saxda ah .
Waxyaalaha ugu wayn ee kugu kalifa in aad xambaarto qof kale fikirkiisa waa un jahli iyo ina adeerkiis ; kuwaa ku odhanaya shaqsi hebel baa saas qaba , kuwo kalana shiikh hebel waxa uu aaminsanyhy .... Iwm ; ogow se kuwaase waa dhabarjabiyayaal raba in u ay kuu loogaan cadowgaaga Adigoon irdhayn diintaada aaasayna dhaqankaaga , ayaad naqon kartaa shaqsi isku filnaansho ka gaaray fikirkiisa .
Afkaarta caalimka carbeedi maahan mid ka ajar badan kuwa reer galbeedka . Fasax fikirka maskaxdaada fadhiya .
Cabdirizaq axmed-dahir ‪#‎mucaad‬
Posted by Abdirizak mu'aad at 14:31 No comments:
Guuldarada ma jecli innaba lkn waxaan madaxa iyo maankaba u ruxaa marka la iiga sheekaynayo dadkii noloshooda guulaha ka gaadhay.
Waan ogsoonahy in uu san jirin shaqsi u darban guuldaro laakiin waxaan aaminsanahy in aysan jirin ashkhaas lagu xudumy guul iyo guuldaraba.
Muuminka waxa ku dhaca oo dhan waa khayr haduu guulaysto iyo haduu guuldaraystaba sida diintu noo sheegtay .
Hadaad guulaysato Rabbi baad mahdin haday kuu noqonwaydanna wixii Illahy kula rabay bay noqon. ILLAHY adoomadiisa xumaan lama doono iyaduna waa bishaaro kale ee dhab u xasuusnow.
Kubbadu waxay sara u kacdaa marka lagu dhufto dhulka si sidaas la mida falaarta hadii aadan xargaha dib loogu celin ma tiigsato kobtaad la rabtay . Aaan si kale u dhahee guuldaraduba waa awood hilin cad u jeexaysa guusha ..
‪#‎cabdirisaaq‬ Sh Axmed-dahir (‪#‎mucaad‬)
Posted by Abdirizak mu'aad at 14:28 No comments:
Xasuus macno ii samaysay!
Xilligii aan ku jirnay waxbarashadii dugsiyada ‪#‎hoose‬ waxay macalimiintu nagu canaanan jireen in aan wax ku qorno oo isticmaalno ‪#‎Qalin_rasaas‬. Si hadii aan u khaladano aan u masaxno si fudud.
markii aanu ka gudubnay heerkaas hoose waxaan qaadanay ‪#‎Qalin_khad‬ , imminka waxaan iska Ilaalinaa in aan khaldano sabtoo ah waa adkaanaysaa si loo tirtiro
Posted by Abdirizak mu'aad at 14:26 No comments:
Waligaa ma iswaydiisay sababta soomalidu ay magacyadooda uga lamaaneeyaan amaantu sida ‪#‎xawo‬-luul , ‪#‎maxamed‬ cade , ‪#‎qaali‬-qalanjo ,‪#‎kowsar‬- dheeman Iwm.?
Waxaa doorwayn ka ciyaara baan odhankarnaa xadaarad la'aanta haraysay soomaalida oo ah dad in badan la daalaa dhacayey jahli ayna ku yartahay ilbaxnimadu.
hadii aadan naynaas qurux badan samaysan waxaad khatar ugu jirtaa in lagugula kufo mid raadwayn ku reebta noloshaada , insaanka waxaa farxad u ah oo uu kugu jeclaanayaa in aad ugu yeedhto magaciisa ugu yaraan hadii aad xoogaa amaana ku dartana Guul, lkn kawaran hadii qof midabkiisa iyo qaabdhismeedkiisa kalsooni xumo ka haysay aad ugu yeedhto oo aad ku lamaaniso magaciisa , haday gabar tahay soo kharashkeedii oo dhan soo siisanmayso waxyaalaha la isku qurxiyo , Hadii uu wiilyahay shinbirku ka duulimaayo.
Suudaanta waa dad asal ahaan aad u madow waliba madow siyaado ah foolxumo haday noqotana tartan ku gali kara ( qaarkood) lkn waxay ku cayntaan ilbxanimada facawayn oo ay intaas harsanayeen , marka uu rabo in uu tilmaamo shaqsi madow waxa uu si sahalan kuu odhanayaa tusale ahaan ma aragtay ninkii cagaarnaa (zool akhdaraani ) .
Markaad ku cusubtahay wadanka waad ku yara wareeraysaa lkn markaad la qabsato waxaad gaaraysaa heer aad shaqsi foolxun ku odhan karto Aabihii quruxda.
Muujinta iyo dhiiranaanta in aad isku kalsoontahy waa tan kaliya oo ku siinaysa moral wanaagsan.
Kalsoonida xooggani qofka waxay gayaysiisaa inuu noqdo qof hal abuur leh, khatarahana waajihi kara.
Adiga soomali ahaan waxaa kula gudboon hadii aadan qofka magaciisa ama midka amaanta ah uu jecelyahy aadan ugu yeerayn in aadan u gaysan garaafo.
‪#‎Cabdirisaaq‬ Sh Axmed Dahir (‪#‎mucaad‬)
Posted by Abdirizak mu'aad at 14:25 No comments:
Kalsoonidu waa ibbofurka qabsashada waxkasta iyo dhaqaajiyaha doonista nafta .Hadii aadan lahayn kalsooni way kugu adkaanaysaa in aad qiimayseo awood gudeedka Illahy ku siiyey .
Qofka aad tahay waa dhadhanka dhabta ah ee jiritaankaaga iyo ahaanshahaaga . Jiritaankaaguna waxa uu noqonkaraa sadex mid uun , mid ruuxeed , mid maskaxeed, iyo mid dareen ama jidheed......
Dhiirigalinta bani aadamka aad dhiiri galiso waxay ka dhigantahy kicinta dareemayaasha awoodaha u leh in ay cariyaan unugyada ku shaqso leh dareemida shakhsiyadaada .
Mohamed Quruf Oo ah tababare nololeed mar uu sharaxayey qiimaha ay kalsoonidu leedahay waxaa uu yidhi
""Shaqsi bilaa kalsooni ahi waxa uu ka dhiganyahy Gaari bilaa shidaal ah , macquul noqonayso in uu socdo , xitaa hadii aad riixdo inbadan gaari karimaayo halka ay tiigsadaan kuwa la mid ka ahi "
Ku kalsoonow naftaada waa isticmaal awoodaha tirro beelka ah ee Illahy kugu manaystay .
Lucky Aadan Yuusuf Cooraaf hal abuurad Da' yar oo aan aad xushmeeyo mar ay la hadlaysay hablaha dhigeeda ah oo ay hareeyeen kalsooni darada ay ku qabaan midabkooda dahabiga ah baan ka hayaa eryadaan cajiibka ah ..
Dhili maayo dushayda
Siibi maayo dubkayga
Diidi maayo habkayga
Daayin caasiyi mayo
Waxay diintu nacayso
weligay dugsan maayo
Cabdirisaaq sh axmed dahir (mucaad)
Posted by Abdirizak mu'aad at 14:23 No comments:
KOR BAAAN IDINKA SALAAMAY.....
ummad kasta oo caalamka ku nool waxay leedahay ‪#‎dhaqan‬ iyo hido u gaara oo looga sooco bulsho waynta kale ee caalmaka .sidaa darteed waxay ummad kasta isku daydaa sidii ay u suuq gayn lahayd dhaqankeeda ugna gadi lahayd ummadaha kale .....
iyadoo intaas oo dhan ay jirto baad moodaa in dadka qurbaha ku nool ay iska indho tiraan bal iska daaye ay isgu faanaan dhaqamada ummadaha kale ......
anigoo iska saarayn dadkaas gatay dhaqankooda baan jecalahy in aan qiso i qabsaty idiin soo gudbiyo:
waa subax aroora sanad dugsiyeedka cusub waa maalintii ugu horaysay oo ay bilaabanaysay daraasadu waan kasoo daahay waqtigii saxda ahaa ee muxaadara (luctures), daal iyo caajis badan baa iga muuqda waxaa ii sii dheer xanuun aan dareemayey subaxaas , waxaan soo galay qaacada (hallka) waxaa fadhiya jamaahir aan ku qiyaasay boqol iyo siyaado waxaan ku soo aaday waqti macalinku ka baxay muxaadarada koobaad , waxaan bilaabay in aan salaamo qof qof jamaahiirtii fadhiday meesha, ILLAHY amarki , waa salaan suudanays kaalay bal adugu dhamee saacad bay kuu ducaynayaa adana la wad ducada , waxaa kuu sii dheer garaac iyo salaan aan la iska gurayn , markii aan toboneeyo ka faraxashy baan daalay OO NAFTII iskugu kay timid jamaahiir badana ay isugayaan , waxaa igu soo dhacay qorshe cusub oo aan salaanta ku dhamaysan karo iyadoo aan la iga xumaan maadaama aan wadan dhan kaligay matalayo waxaan soo is taagay ardayda horteeda waxaan hadalkaygii ku soo koobaay :
‪‎KOR‬ BAAN IDINKA SALAAMAY DHALINAYRO waan idiiin xiisay , sanad dugsiyeed wacan baan idiin rajaynayaa ..
tan iyo maalintaas wixii ka danbeeyey kaygaan haysataa oo iskuma dhibin mid aanan ka bixi karin waxaan ku dadaalaa in aan kayga ka dhaadhiciyo akhyaarta kale idinka waan idiin rajaynayaa .....
Abdirizak sh Ahmed Dahir( mu'aad)
Posted by Abdirizak mu'aad at 13:45 1 comment:
Oday soomaaliyeed oo jacel Dalkiisa iyo Dadkiisa inta badana wax ka qora arrimaha bulshada .
Abdrizack Mu'aad | Create Your Badge
wax ka baro khayraadka dhulkeenu qaniga ku yahay ...
Dagaalka ugu culus oo maanta dunidu ku jirtaa waa ...
Guuldarada ma jecli innaba lkn waxaan madaxa iyo m...
Xasuus macno ii samaysay!Xilligii aan ku jirnay wa...
sir qarsoonWaligaa ma iswaydiisay sababta soomalid...
#‎Kalsoonida‬Kalsoonidu waa ibbofurka qabsashada w...
KOR BAAAN IDINKA SALAAMAY..... ummad kasta oo caa...
WAAD KU MAHADSANTAHY IN AAD DAALAACATAY DAGALKA, KUSOO DHAWOOW GACMO FURAN IYO MAAN HUFAN